गोरखा क्याम्पसको आईशोलेशन ब्यवस्थापन जिम्मा अस्पताललाई | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २२ श्रावण २०७७, बिहीबार १६:३६
गोरखा क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टिन सहितको आईशोलेशनको जिम्मा गोरखा अस्पताललाई दिइएको छ । बिहिवार बसेको जिल्ला स्तरीय कमाण्ड पोष्टको बैठकले ७६ बेडको उक्त आईशोलेशन अब संचालन गर्न अस्पताल बिकास समितिका सदस्य गोर्वद्धन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
आईशोलेशन सञ्चालन कार्य समितिको सदस्य सचिवमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट नबिन थापा रहेका छन् । सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधि, गोरखा नगरपालिकाले तोकेको कर्मचारी प्रतिनिधि र स्वास्थ्य कार्यालयले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन् ।
अहिले सम्म भएको खर्चको ब्यवस्थापन भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको आईशोलेशन ब्यवस्थापन एवं कोष सञ्चालन समितिबाट गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।